Wararka - Farqiga u dhexeeya cations iyo dharka suufka ah
Dharka cationic iyo dharka suufka saafiga ah labaduba waxay leeyihiin astaamaha jilicsanaanta wanaagsan iyo dabacsanaanta wanaagsan. Midkee wanaagsan, waxay ku xiran tahay doorbididda shaqsiyeed. Dharka suufka saafiga ahi had iyo jeer wuxuu ahaa nooc maro ah oo qof kastaa doorbidayo inuu isticmaalo nolosha, halka marooyinka cationic lagu farsameeyo habab jidheed oo gaar ah si loo sameeyo dunta kateetarka sida dunta cationic polyester ama dun nylon cationic.
1. Faa'iidooyinka dharka cationic:
1. Mid ka mid ah astaamaha marada cationic waa saamaynta labada midab leh. Iyada oo leh astaantan, qaar ka mid ah dhar-midab leh oo leh laba midab oo midab leh ayaa la beddeli karaa, taas oo yaraynaysa qiimaha dharka. Tani waa dabeecadda dharka cationic, laakiin sidoo kale waxay xaddidaysaa astaamaheeda. Dharka midab-kala-duwan leh ee midabka leh, maryaha cationic waa la beddeli karaa oo keliya.
2. Dharka Cationic wuxuu leeyahay midabyo dhalaalaya oo aad ugu habboon fiilooyinka macmalka ah, laakiin waxaa loo adeegsadaa dhaqidda iyo deg -degga iftiinka cellulose dabiiciga ah iyo dharka borotiinka.
3. Iska caabinta abrasion ee marooyinka cationic sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Ka dib markii lagu daro xoogaa fiilooyin macmal ah sida polyester iyo spandex, waxay leedahay awood sare iyo dabacsanaan ka sii wanaagsan, iska caabinta abrasion -ku waa kan labaad oo kaliya nylon.
4. Dharka kayntu waxay leeyihiin qaar ka mid ah sifooyinka kiimikada, sida iska -caabbinta daxalka, iska caabinta alkali -ku -milan, iska -caabbinta wakiilada dhiig -baxa, oxidants, hydrocarbons, ketones, badeecadaha batroolka, iyo asiidhyada aan nooleyn. Waxay sidoo kale leeyihiin xoogaa astaamo jireed, sida iska caabinta shucaaca ultraviolet.
2Faa'iidooyinka dharka suufka saafiga ah:
1. Dharka suufka saafiga ahi waa raaxo: dheelitirka huurka. Fiber-suufka saafiga ahi wuxuu ka nuugi karaa qoyaanka jawiga ku xeeran, qoyaankiisu waa 8-10%, wuxuuna dareemayaa jilicsanaan laakiin ma adkaanayo markuu taabto maqaarka.
2. Dharka suufka saafiga ah si aad u kululaato: diiran: fiber -ka suufku wuxuu leeyahay isku -dheelitirnaanta kuleylka iyo korontada oo aad u hooseysa, fiber -ka laftiisu waa duleel iyo dabacsanaan sare, iyo farqiyada u dhexeeya fiilooyinka waxay ururin karaan hawo aad u badan (hawo sidoo kale waa kirishbooy xun oo kulayl iyo koronto). Haysashada diirimaadku waa mid aad u sarreeya.
3. Maro suuf oo waarta:
(1) Marka heerkulku ka hooseeyo 110 ℃, waxay kaliya keeni doontaa in marada ay uumi -baxdo iyada oo aan waxyeello gaarsiin fiber -ka. Ku dhaqidda, daabacaadda iyo midabaynta heerkulka qolka wax saamayn ah kuma laha marada, taas oo hagaajinaysa ka -dhignaanta dharka iyo cimri -dhererkiisa.
(2) Fiber -suufku wuxuu dabiici ahaan u adkaysan karaa alkali, oo fiber -ka ma burburin karo alkali, kaas oo u wanaagsan dhaqidda dharka. Iyo midabaynta, daabacaadda iyo hababka kale.
4. Ilaalinta deegaanka: Fiber suufku waa fiber dabiici ah. Dharka suufka saafiga ahi ma laha wax cuncun ah oo taabanaya maqaarka, waana mid waxtar u leh oo aan waxyeello u lahayn jidhka aadanaha.
Waqtiga dhejinta: Sep-11-2021